Ahoana no ahafahan'ny tranok'asa fandraisam-bahiny hotely ahafahana mamadika rohy ho an'ny SEO?
Ny fahaiza-manaony dia mampiavaka ny tsenan'ny hotely fisakafoana. Izany no mahatonga ny tranokala habaka amin'ny tranokalan'ny tranom-barotra ho laharam-pahamehana.
Ny fijerena backlink dia rohy iray avy amin'ny loharano iray hafa izay manondro ny sehatra misy anao. Ny ivon-drakitra tsirairay dia tokony hodinihina amin'ny votoatiny manan-danja sy mifanentana amin'ny fitaterana fifamoivoizana amin'ny loharano mifandraika. Ankoatra izany, ny rohy dia tokony hafenina ao anaty lahatsoratra amam-bika iray amin'ny iray amin'ireo teny fikarohana indrindra tianao hotsaraina amin'ny môtera mitady.
Ny rohy rehetra manonona izay manondro ny tranokalan'ny hotely anao dia manome safidy eo imason'ny milina fikarohana. Ny habam-pifandraisana marika bebe kokoa dia manondro ny tranokalanao, ny fahefana bebe kokoa azonao avy amin'ny fitaovam-pikarohana, ary avy eo, ny avo kokoa hapetraka amin'ny SERP.
Misy fahasamihafana kokoa amin'ny backlinks toy izany. Ny fitaovam-pikarohana dia mandray an-tsoratra algorithm maro mba hamaritana ny toerana misy anao eo amin'ny toerana misy anao (raha ny marina dia misy mihoatra ny 200 ny isan'ireo sokajy Google). Ny fahefana ananananao sy ny lazanao marika koa dia manana andraikitra amin'ny maha-sarobidy ny piraofilinao.
Ity lahatsoratra fohy ity dia natao hizarana aminareo tsiambaratelo fananganana tranokala momba ny fomba hiverenan'ny rindranasa ho an'ny SEO. Ireo fomba ireo dia hanampy anao hampitombo ny herin'ny tranokalan-trano misy anao ary ho lasa mpitarika ny tsena nasionaly.
Practical ways to get backlinks for web site SEO
Reviewing Directories Online Business
dia hahomby amin'ireo orinasa marolafy izay te-hanatsara ny fahombiazany eo an-toerana.
Fomba tsotra ahafahana mahazo rohy mankany anaty. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mitady lisitry ny Internet izay ahafahana mampiditra ny votoatiny. Heveriko fa ny votoatin'ny fandraisam-bahiny hotely dia hijery ny natiora amin'ny tranokalan'ny vondrom-piarahamonina, ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, ary ny anaran'ny orinasan-tanàna. Azonao atao ihany koa ny mikaroka ny indostrian'ny varotra, toy ny fikambanan'ny mpivarotra vahiny sy ny fikambanana fizahan-tany ao an-toerana.
Misy fomba roa ahitanao ireo tatitra mivantana amin'ny orinasa an-tserasera. Ny voalohany dia ny fitadiavana ny fikarohana Google amin'ny fangatahana tahaka ny "anaran-trano fandraisam-bahiny + anaran-tanàna", "lisitry ny orinasa + anaran-tanàna," "ny vondrom-piarahamonin'ny tanàna + sy ny anaran'ny tanàna," sy ny sisa. Fomba iray hafa koa ny manao fanadihadiana momba ny lozam-pifaneraserana amin'ny iray amin'ireo fitaovana matihanina amin'ny aterineto (MOZ Pro, Semalt Web Analyzer, sns.)
Asehoy ny fifandraisanao an-tserasera amin'ny Internet
ny tontolo an-tserasera. Raha mitarika orinasa any amin'ny hotely ianao, manana mpiara-miasa maro sy fifandraisana amin'ny orinasa hafa eo an-toerana ianao, toy ny mpamatsy sakafo, orinasa fanadiovana, fialam-boly ary ny sisa. Azo inoana fa efa nanangana orinasa an-tserasera ny orinasa eto an-toerana, saingy mbola tsy fantatrao izany. Izany no antony tokony handinihanao io vaovao io ary ataovy izay azonao atao mba hampisehoana ny fifandraisana an-tserasera ao amin'ny Internet. Ny mpiara-miombon'antoka raharaham-barotra dia mety ho faly kokoa hampisy fifandraisana ara-barotra eo amin'ny fifandraisan'ny mpivarotra.
Ankoatra izany, azonao atao ny manome ny mpividy anao ho porofo tsara momba ny asa ataony. Azonao atao ny mametraka ny URL eo amin'ny sehatra ao amin'ny pejin-dry zareo ao amin'ny lisitry ny mpanjifa avo lenta, na koa manoratra fanamarihana momba ny orinasa Source .